आजको राशिफल : आइतबार कुन-कुन राशिका शुभ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : आइतबार कुन-कुन राशिका शुभ ?
Khabar house | २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०१:२६ | Comments
काठमाडौं : विसं २०७८ साल जेठ २३ गते आइतबार । इस्वी सन् २०२१ जुन ०६ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि–एकादशी, ०७ घडी १३ पला, बिहान ०८ बजेर ०३ मिनेट उप्रान्त द्वादशी । नक्षत्र– अश्विनी, ५७ घडी ०१ पला, रातको ०३ बजेर ५८ मिनेट उप्रान्त भरुणी । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ०९ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५५ मिनेट । दिनमान ३३ घडी २५ पला । अपरा एकादशी व्रत ।
मेष राशि : प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर आउनेछ भने विशिष्ट व्याक्तिहरू नजिकिने छन् । कन्फिडेन्ट पावर बढ्ने हुँदा उपलब्धिमूलक काम बन्नेछन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरूले पद पाउने समय रहेको छ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ।
बृष राशि : न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर काममा व्यस्त हुनुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । आर्थिक अभावले महत्त्वपूर्ण काम थाँती रहने छन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्या बढ्ने तथा औषधि उपचार खर्च बढेर जाने छ । अन्य काममा सहभागी हुँदा पढाइ लेखाइ भने थाँती रहनेछ । तर पनि विदेशी भूमिमा बसेर श्रम गर्नेहरूले मनग्गे रूपैयाँ पैसा कमाउन सक्नेछन् ।
मिथुन राशि : आम्दानीका बाटा ए’क्कासि बन्द हुँदा दैनिक रूपमा चलिरहेका काम प्रभावित हुनेछन् । विवादित विषयहरूको उठान नगर्नु होला, आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने छैन। पढाइलेखाइमा मन नजाँदा अरूभन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरे पनि नाफा कमाउन केही समय कुर्नुपर्नेछ । अग्रज तथा दाजुसँग बिनाकारण वि’वाद हुने योग रहेको छ । चाहेका वस्तु समयमा उपलब्धि नहुँदा मन खिन्न हुनेछ ।
कर्कट राशि : साङ्गीतिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । नीति निर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । पढाइ लेखाइमा भनजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
सिंह राशि : परिवार तथा आफन्त जनसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । पति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ। सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला दुर्घ’टना तथा अ’प्रिय घटना घट्न सक्छ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकैहरूबाट धो’का हुनेछ ।
कन्या राशि : व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने तथा घर परिवार तथा पतिपत्नीबीच घरायसी कुरामा वि’वाद सिर्जना हुनेछ । गोप्य सूचना बहिरिने हुँदा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । सहयोग गर्नेभन्दा आश्वासन बाढ्नेहरू धेरै भेटिनेछन् । स्वास्थ्यमा समस्या आई सुरु गरेका काम सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहनेछैन । मनोबल कमजोर हुने हुनाले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिनेछ ।
तुला राशि : इमानदार पूर्वक गरिएको प्रयत्नले लक्ष्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । टिम निर्माण गरी काम गर्दा भने जस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ भने विभिन्न भौतिक सम्पति जोड्न सकिने छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हात लाग्ने हुँदा आफू तथा शुभचिन्तकहरू खुसी रहनेछन् । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ ।
बृश्चिक राशि : अध्ययनमा समय दिन नसके पनि अतिरिक्त ज्ञान गुनका कुरा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ । तपाईंको नराम्रो सोच्नेहरू आफै किनारा लाग्नेछन। शत्रु परास्त हुनेछन् भने ठूलावडाको आशीर्वादले अगाडि बढ्न सहज हुनेछ । परिवारमा मेलमिलापको भाव बढ्नेछ भने एक अर्काबीच आत्मीयता वृद्धि भएर जानेछ । मामा तथा मावली पक्षका मानिससँग भेटघाट हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
धनु राशि : पढाइलेखाइ बिग्रने तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी नहँुदा आर्थिक सन्तुलन बिग्रने योग रहेको छ । मायाप्रेममा एक अर्कालाई अविश्वास गर्नाले बाध्यता बस टाडा हुनु पर्नेछ । आफन्त तथा सन्तानले तपाईंको काममा सहयोग नगर्ने तथा भनेको नमान्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गु’म्न सक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्या आउने योग रहेको छ ।
मकर राशि : घरजग्गा तथा सवारी साधनको व्यापार व्यावसायबाट सन्तोषजनक नाफा कमाउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको आलो’चनात्मक समर्थन रहनेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछाडि परेको भान हुनेछ । छाती सम्बन्धी स’मस्याले नसताउला भन्न सकिन्न । आमा तथा आमासरहका मानिससँग वि’वाद हुनेछ । प्रे’म प्रसङ्गमा रमाउने चाहनेका लागि समय मध्ययम रहेको छ । तर पनि कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय भने फस्टाएर जानेछ ।
कुम्भ राशि : आत्मीय मित्र तथा दाजु भाइहरूको सहयोग पाइने हुँदा मन प्रसन्न हुने छ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहानेहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ । पढाइ लेखाइमा मन जाने तथा उत्कृष्ट नतिजाको साथमा सम्मानित हुने योग रहेको छ । दैनिक जीवनलाई सहज हुने छोटो तथा रमाइलो यात्रा हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
मीन राशि : आफन्त तथा कुटुम्बसँग व्यावहार गर्दा वा कुनै पनि काम गर्दा सावधानी अपनाउनु होला कामहरू बिग्रने तथा मनमुटाव पैदा हुनसक्छ । समय मध्ययम रहेकाले परिबन्धमा परिने तथा झैझगडा हुने अधिक सम्भावना रहेको छ । मायाप्रेममा अविश्वास बढ्नाले मन खिन्न हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा मीठो मसिनो भोजन गर्ने अवसर जुर्ने भए पनि खानपानको तालमेल नमिल्दा सामान्य स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आउनेछ। पढाइलेखाइमा अल्छी गर्नाले अरूभन्दा पछि परिनेछ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् । युवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी, ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र ।